Obbo Lammaa Magarsaa Itiyoophiyummaaf maaltu akkas isaan belbelcha? -
Garee Mo’u | Muddee 30, 2017.
Kutaa – II
Erga Minilik fedhii uummataan osoo hin taanee humna waraanaan Itiyoophiyaa har’a jirtu kana gadi dhaabee jalqabee, mootummooti Itiyoophiyaa angootti dhufan hundi, Itiyoophiyummaa fi tokkummaa Itiyoophiyaa kan hin lallabin hin jiran. Mootummaan Wayyaanees sanuma afaaniin labsee angootti dhufe. Kan dhabame garuu tokkummaa uummatootaa osoo hin taanee mirga dimookraasii fi kabajamuu mirga dhala namaati.
Obbo Lammaa Magarsaa maaltu adda isaan godha laata?
Mootummaan Wayyaanee sababa guyyaa ayyaana Sabaa fi Sablammootaa kabajuu jechuun wagga-waggaan naannoo gara garaatti uummata filee walitti yaasuun dhiichisaa akka jiru beekkamaadha. Obbo Lammaan maqaa uummata Oromoo fi uummata Amaaraan namoota qubaan lakkaawaman Bahir Daaritti geessee maqaa tokkummaan, ”Itiyoophiyummaan suusii” dha, “Itiyoophiyummaan dhiiga irra dabree onnee keessa nu jira” jechuun dhiichisaa ture kun, mee kan mootummaan isaanii wagga waggaan godhu san irraa maal adda jira.
Qabsoon ummata Oromoo ABO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa jirus tahe, qabsoon gartuu kamiinuu biyya Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture fi ammallee itti jiru, sirna cunqursaa mootummoota abbaa hirree irratti malee takkaa uummata irratti xiyyeeffatee hin beeku. Ummatoota gidduutti waraannis banamee hin beeku. Rakkoon tokkichi dhihoo kana uummata Oromoof uummata Somaalee walitti buusellee waldhabbii uummatoota gidduutti tahe osoo hin taanee, shira mootummaan obbo Lammaa Magarsaafaa qooda keessaa qaban, daba mootummaa EPRDFn xaxamee ummatoota bara hedduuf nagana waliin jiraachaa jiran walitti buusee dha.
Obbo Lammaanfaa umurii aangoo mootummaa wayyaanee dheeressuuf ofumaaf abidda qabsiisanii uummata ficcisiisaa, karaa biraa ammo maqaa tokkummaa uummata Oromoo fi uummata Amaaraan tooftaa dulloomaan uummata sobaa jiran. Qabsoon uummati Oromoo fi uummatoota biroos Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru, cunqursaa bifa hundaa dhabamsiisuudhaan mootummaa abbaa-irree kana of irraa buqqisanii sirna dimookraasii dhugaa gadi dhaabuudhaan, ummatootni Itiyoophiyaa hundumtuu dhiibbaa tokko malee hiree ofii ofiin murteeffachuu hojii irra oolchuu dandayuu dha. Hiree ofii ofiin murteeffachuun ammoo wal qixxummaa fi jaalala uuma malee mirga saba kamiillee yaaddoo keessa hin galchu. Kanaafuu obbo Lammaa Magarsaa fi gareen isaa rakkoon uummatoota Itiyoophiyaa gidduutti kan uumame fakkeessanii, qabsoo uummatooti gaggeessaa jiran ukkaamsuuf yaaluun haxxummaa laga hin ceesifne dha. Kanas uummani Oromoo fi qabsa’onni Oromoo hundi hubachuu qabu.
Akkasumas Obbo Lammaan Oromiyaa keessa oliif gadii deemanii uummata walitti qabuudhaan, takka artistoota Oromoo, takka Atileetota Oromoo warra qabsoo Oromoo keessatti wareegama guddaa kafalaa har’a gahan, afaan damma dibatanii itti dhihaachuudhaan, akka waan uummatni Oromoo walii isaa gidduutti tokkummaa dhabee rakkachaa jiru tokkotti waa’ee tokkummaa yeroo lallaban dhagahama. “Kan si morodetu na qare” jedha uummatni Oromoo obbo Lammaadhaan. Uummatni Oromoo akka sabaatti tokkummaadhaan ka’eetu mirga isaaf falmachaa jira. Keessumaayyuu waggootii sadan dabran kana uummatni Oromoo, dhiiraa -dubartii, jaarsaa-ijoollee, baha-lixa, kaaba-kibba osoo hin jennee bakka tokkotti meeshaa waraanaa tokkollee osoo hin qabaannee, tokkummaasaatiin ka’ee mootummaa Wayyaanee(kan obbo Lammaa Magarsaafaa) jilbeenfachiisee, biyyicha bulchuu dadhabuu irraa labsii hatattamaa labsuudhaan biyyaa guutuu bulchiinsa humna waraanaa jala akka galuu kan taasisee dha.
Akka mootummaa Wayyaaneetti, uummati Itiyoophiyaa , waggooti sadan dabran kana mootummaa irratti fincilanii kan qabsaawaa jiraniif, sababa kiraay sassaabdotaa, kontrobaandistotaa fi hanqina gubboo fudhachuu dha malee rakkoon siyyaasaa biraan hin jiru jechuudhaan mootummichi farra dimookraasii fi abbaa irree tahuu isaa dhoksuu barbaadu. Rakkoon kunis kan furamuu dandayu haromsa gadifageenyaan(Xilq-Tahaaddisoo”n) taha jedhanii uummata sobaa jiru. Mootummaan obbo Lammaa Magarsaas rakkoo biyyicha mudate ilaalchisee ergaadhuma mootummaa wayyaanee kana uummata keessa deemanii sobaa jiran malee jijjiirraan isaan fidan takkalleen hin jiru.
OPDOn yeroo ammaa kana qama mootummaa EPRDF (mootummaa Itiyoophiyaa) ti moo miti? Dhuguma mootummaa EPRDF waliin waldhabbii qabaa? Yoo waldhabbii qabaate akkamitti waliin mootummaa gaggeessaa jiran? Ummatni oromoo karaa Oromiyaa bahaa, kibbaa fi kibba bahaa, daba mootummaa wayyaaneetiin waraanni itti banamee namni hedduun ajjeefamee, kumaatamaan kan lakkaawaaman qaamaa hir’atanii, 50000 ol kan tahan qe’ee isaanii irraa buqqaa’anii jiru. mootummaan obbo Lammaa magarsaa biyya hin turree? Walfakkeessaan obbo Lammaanfaa uummata keenya jedhanii imimmaan nyaachaa boo’uu yaalan kun maal jechaa dha? Waraana uummata Oromoo irratti bansiisanii ka’anii boo’anii maraachuun kun waraana isaan hinbeeknetu banamee jechaa jiruu laata? Humni waraana uummata Oromoo irratti bane biyya alaatii dhufee? Mootummaan Itiyoophiyaa hoo humna nagayaa biyyaa eegu hin qabduu? Hinqabdu taanaan mootummaan hin jiru jechuu dhaa? Mootummaan jira taanaan mootummaan OPDO fi mootummaan Abdi Ille qaama mootummaa Itiyoophiyaa mitii? Qaceen ofumaa dhooftte/rukuttee dursitee iyyiti” kan jedhan san tahe. Uummati keenyaa osoo rakkoo guddaa duula waraana kanaan irra gahe keessa jiruu, mootummaan OPDO daldala siyaasaa akeeka godhachuun daranuu uummata gowwoomsee mootummaa wayyanee mormii uummataan caccabee jilbeenfachaa jiru lubbuu itti horuuf akka saree maraatte olii fi gadi kaachaa jira.
Gartuun obbo Lammaa Magarsaa, “Haaromne” jedhanii kan uummata Oromoo sossobaa jiran maal akka tahe, ajjeechaa humni ittisa rayyaa mootummaa EPRDF Muddee 11, 2017 Calanqootti, uummata Oromoo irratti gaggeessee irraa hubachuun nama hindhibu. Obbo Lammaan karaa tokko uummata Oromoo malee gooftaa biraa hinqabnu jedhanii uummata Oromoo sobaa, kara biraa humni waraanaa federaalaa Oromiyaa seenee, Calanqootti gochaa duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti yeroo gaggeeffamu, mataan waajjira beeksisii Oromiyaa kan tahe obbo Addisu Arega Kitessa garuu, maddi rakkoo kanaa dargaggoota Oromoo/Qeerroo akka tahe fakkeessuuf, “Qabsoo miiraa fi bifa jeequmsaan gaggeeffamu irraa of qusaadhaa, aarsaa hinbarbaachiifne nu kafalchiisaa” jedhee, dargaggoota Oromoo/Qeerroo sodaachiisuudhaan fuula Face book isaa irratti barreessee ture. Egaa akka Obbo Lammaan afaan mi’eeffate uummata Oromoo malee gooftaa biraa hin qabnu jedhu osoo hin taanee, gooftaa biraa qabaachuun isaanii akkasitti ifatti mul’ata.
Akkasumas mootummaan Wayyaanee rakkoo isa mudate kanaan baaraguudhaan Haaromsa gadifageenya/“Xilq- Tahaaddisoo” kan jedhamu karoorfatee, keessumaayyuu bakka diddaan uummataa itti hammaatee ture, naannoo oromiyaa fi naannoo Amaaraatti karoora isaa kana akka hojii irra oolchaniif ergamtootaa isaa kana bobbaafatee lubbuu mootummichaa dheerreffachuuf wixxifachaa jira. Kanaafuu isaanumaanuu kan akka gadi bahan isaan godhe, qabsoo uummatni Oromoo bakka takkatti waliin sosso’ee gaggeesse tahuu obbo Lammaan osoo beekanii miliqqee taphachuu barbaadu. Wayyaaneen kufaatii irra gahaa jiru baraarfachuuf, shira xaxxee qaruuxummaa obbo Lammaafaa bobbaafatte kana hubachuun uummata Oromoo kan rakkisu miti.
Tokkummaa Oromoo obbo Lammaan dubbachaa jiran garuu, tokkummaa uummatni Oromoo jaarmiyaa isaanii OPDO waliin godhachuu qabuu dha. Kanas taanaan uummatni Oromoo, nam-tokkee miseensota OPDO irraa akka Oromootti jibba tokkoollee hin qabu. Dhaaba OPDO akka dhaabaatti garuu Wayyaaneetu akeeka ofiif tolfate waan taheef, hariiroo mootummaa Wayyaanee waliin qabu haga hin kutinitti tasuma kan ofitti hinfudhane tahuun beekkamuu feesisa.